जिल्लाका दुई स्रष्टाको कृति आज यहाँ विमोचन गरिएको छ । बेलकोटगढी नपा–७ महादेवफाँटमा आयोजित कार्यक्रममा रामकृष्ण गजुरेललेका मुक्तक सङ्ग्रह ‘कर्कलाको पानी’ र भगवती खनालको गजल सङ्गह ‘माटो बोल्छ’ विमोचन गरिएको हो ।
ती कृतिको नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बहादुरसिंह लामाले विमोचन गर्नुभएको हो । ती कृति नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहमहामन्त्री डा महतले साहित्य समाजको ऐना भएकाले समाजको परिघटना, परिवर्तन र समाजको मनोदशालाई उतार्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तामाङले साहित्यले वर्तमानको मात्र नभइ भविष्यको समेत दृष्टि दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘कर्कलाको पानी’ मुक्तक सङ्ग्रहमा २६० मुक्तक सङ्ग्रहित छन् । उहाँका यसअघि ‘हो रहेछ’ कविता सङ्ग्रह, ‘नेपाल आमाले दिएको कलम’ खण्डकाव्य, ‘यथार्थको खोज’ कविता सङ्ग्रह, ‘भूकम्पको पीडा’ खण्डकाव्य र ‘स्वादमग्न झुपडी’ सिजो सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ । ‘माटो बोल्छ’ गजल सङ्ग्रहमा १०१ गजल सङ्ग्रहित छन् । उहाँले २०६४ सालमा ‘छुट््याइएका गुच्छा’ गीतिसङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको थियो । (रासस)
सकसबाट पहिल्याएको विमलाको सिर्जना यात्रा
फट्के तर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
डा. तारानाथ शर्मा र शान्ताकाे ५० वर्षे प्रेमिल यात्रा
बंगलादेशमा नौगेडी मञ्चन
दर्जन भाषामा विश्वप्रकाशले बनाए जागरण गीत
तीन रुपैयामै पुस्तक!
गीतमा परदेशीका गीत
परशु प्रधानको अधुरो सपना
छन्द–तरंगको दोस्रो शृंखला सम्पन्न